सबैको ध्यान खिचेको काठमाडौं र भरतपुरमा कसले मार्ला बाजी ? दोस्रो दिनको प्रभातकालिन अपडेट बाहिरियो | Prahar News
सबैको ध्यान खिचेको काठमाडौं र भरतपुरमा कसले मार्ला बाजी ? दोस्रो दिनको प्रभातकालिन अपडेट बाहिरियो
काठमाडौं । सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको काठमाडौं महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाको दोस्रो दिनको मतपरिणाम बाहिरिएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म काठमाडौंमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले झण्डै दोब्बर मतसहित अग्रता कायमै राखेका छन्। ४४५३ मत गणना हुँदा बालेनले १५७८ मत ल्याएका छन्।
यस्तै मेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले ८७८ मत ल्याएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट मेयर उम्मेदवार सिर्जना सिंहले ७१९ मत प्राप्त गरेकी छन्। मतगणना जारी छ। केही स्थानको मतगणना कर्मचारी थाकेका कारण रोकिएको खबर बाहिरिएको छ ।
यस्तै उता भरतपुरमा पनि गठबन्धन उम्मेदवारले अग्रता फराकिलो बनाउदै लगेको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनकी रेनु दाहालले अग्रता बढाएकी छन्।
नेकपा माओवादीकी उम्मेदवार दाहालले ९ सय ३२ मत ल्याएकी छन्। उनले एमाले-राप्रपा गठबन्धनका विजय सुवेदीलाई १ सय १६ मतले पछि पारेकी हुन्
एमालेका उम्मेदवार सुवेदीले ८ सय १६ मत ल्याएका छन्।
कांग्रेसका बागी जगन्नाथ पौडेलले ३ सय ९ मत ल्याएका छन्। उपमेयरमा भने कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले फराकिलो अग्रता लिएका छन्। अधिकारीले १ हजार १९ मत ल्याएका छन् भने राप्रपाकी हिमला गुरूङले ६ सय ६७ मत ल्याएकी छन्।
काठमाडौं र भरतपुर